mai 2013 – filazantsaramada
« Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana; ary izay mitoetra amin’ny fitiavana no mitoetra ao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. » (I Jaona 4:16) Ny Epistily dia taratasy soratana amin’ny olona efa mino. Izany no anton’izao teny hitantsika eto izao. » Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan’Andriamanitra antsika. » NOFORONINY TAHAKA […]
Publié parfilazantsaramada mai 31, 2013 juillet 2, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ANDRIAMANITRA DIA FITIAVANA
« Indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo » Lioka 10: 19-20 Notoherin’ny ‘Luddites’ ny Revolisiona Indostrialy izay nitranga tany Angletera tamin’ny voalohandohan’ny taona 1800. Noheverin’izy […]
Publié parfilazantsaramada mai 24, 2013 juin 28, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ny fomba handresena an’i Satana
* Club FF Lycée Nanisana Nitohy tamin’iny volana Aprily 2013 iny ny fanasàna ny Club Feon’ny Filazantsara (FF) avy eny amin’ny Lycée Nanisana ho amin’ny famangiana Fiangonana. Ny Alahady 21 April 2013 lasa teo dia tanteraka soa aman-tsara koa ny asa fitoriana an-kira nataon’ireo mpianatra ao amin’io Club FF io teny amin’ny FJKM Imeritsiafindra Filadelfia. […]
Publié parfilazantsaramada mai 21, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Miaingà, mandehàna mitety ny tany
Fiaraha-miombon’ antoka Fileovana Sahamadio (SPAFi)/ Feon’ny Filazantsara
Ainga vao ho fanatsaràna sy fampandrosoana ny asa Fitoriana Misaotra an’Andriamanitra fa dia tanteraka ny fikasàna ny hanitarana ny fiaraha- miasa amin’ny Synodam- paritany hafa. Ny 26, 27, 28 Aprily 2013 teo mantsy dia tontosa soa aman- tsara ny Fampiofanana « Fampitaovana ny olona masina« voalohany tany amin’ny Synodam-Paritany Fisakana (SPAFi). Mpiofana 35 no nandray anjara […]
Publié parfilazantsaramada mai 21, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’ antoka Fileovana Sahamadio (SPAFi)/ Feon’ny Filazantsara
Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mbamin’ny vehivavy sy Maria, renin’i Jesosy ary ny rahalahiny. Asa 1: 14 Ny tantara eto amin’ny Asan’ny Apostoly talohan’izao teny izao dia milaza ny amin’ i Jesosy nakarina, ary nisy rahona nitondra Azy, ka tsy hitan’ny maso intsony Izy. Tafasaraka tamin’ireo mpianany Jesosy. Tsy hahita an’i Jesosy amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada mai 17, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY VOKATRY NY FISARAHANA TAMIN’NY TOMPO
Ny sofintsika afaka mamantatra feo: mety feo mahafinaritra, mety feo mankadilo koa, ary misy aza feo izay tsy mba ren’ny sofin’olombelona akory toa ny « ultra son » ohatra. Ny masontsika dia mahita ny lokom-bonikazo kanto dia kanto ery. Ny endriky ny faravodilanitra dia mamelona eritreritra ny amin’ny fahatsaràn’ny asan’Andriamanitra; nefa, ao koa ireo zavatra mahatsiravina mampihoronkoditra […]
Publié parfilazantsaramada mai 10, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANAHY MAMANTATRA NY ZAVATRA REHETRA!
« Ka dia atsangana koa hianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. » IPet 2: 5 Ny mpisorona tany aloha, tamin’ny Testamenta taloha dia ireto telo ireto no asany: – Manao ny asa fanompoana ho an’ny Tompo ao amin’ny Tempoly – Mampianatra ny lalàna hoan’ny […]
Publié parfilazantsaramada mai 3, 2013 juin 28, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY MPISORONA AMIN’IZAO ANIO IZAO